ဂျူးစံသာနဲ့ လှယဉ်ကျေးတို့ရဲ့သရဖူကို အေးချမ်းမြေ့ရသွားပြီ | venuscurves
ဂျူးစံသာနဲ့ လှယဉ်ကျေးတို့ရဲ့သရဖူကို အေးချမ်းမြေ့ရသွားပြီ
ဒီနှစ်အတွက် Miss Globe Myanmar သရဖူကို မကြာသေးခင်ကအထိ ဆောင်းခဲ့သူက ဂျူးစံသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း သူ သရဖူ ရုတ်သိမ်းခံရပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့မှာတော့ ဂျူးစံသာ နေရာ ၀င်လာသူက အလှမယ် လှယဉ်ကျေး ဖြစ်လာပြီ၊ စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း Miss Globe Myanmar Organization ဆိုတဲ့ အေဂျင်စီရဲ့ တာဝန်ခံ မလှနုထွန်းက သတင်းဌာနတွေကို ပြောပါတယ်။
လှယဉ်ကျေးနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ကလည်း ရက်ပိုင်းပဲ ခံပါတယ် – လှယဉ်ကျေး ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့အတွက် သူ့လုံခြုံရေးအရ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း
မလှနုထွန်းက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တနင်္လာညနေပိုင်းကရေးပါတယ်။
ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ခြိမ်းခြောက်ခံရတယ် ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ခြိမ်းခြောက်တယ် ဆိုတာတွေကိုတော့ သူက ရှင်းမထားပါ။
အဲဒီတော့ မလှနုထွန်းက အလှမယ်အသစ်ကို ထပ်မံကြေညာပါတယ်။
အေးချမ်းမြေ့နဲ့တော့ အတည်ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပြည်ပမှာ ထွက်ပြိုင်ရမယ့် ပြိုင်ပွဲက ရက်ပိုင်းပဲ လိုတော့တဲ့အတွက်ပါ။ Miss Globe International ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အေးချမ်းမြေ့နဲ့ စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်း မလှနုထွန်းရဲ့ ရေးသားချက်ကိုလည်း ဒီပို့စ် အဆုံးမှာ တွေ့ရမှာပါ။ သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ကူးယူလိုက်တာပါ။ မြန်မာလိုတော့ မကြာခင် ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ သဘောတူထားတဲ့ စာချုပ်အတိုင်းဆို အလှမယ်က အေဂျင်စီကို အနုပညာကြေး ၃ဝရာခိုင်နှုန်း ပေးရပါမယ်။ အလှမယ်ရဲ့ ၃ နှစ်တာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေက ထွက်လာမယ့် ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း ထဲက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းပါ။
အေဂျင်စီကတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့တို့ သင်တန်းတို့ ဘာတို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံကတော့ မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ အလှပြိုင်ပွဲမှာ တွေ့ရတဲ့ အေးချမ်းမြေ့ပါ။
ဧရာဝတီ ဓာတ်ပံသတင်းထောက် ဂျေပိုင်ရဲ့ရိုက်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Dearest Beauty Pageant fans, friends and family members of Miss Globe Myanmar,
Today, another tough decision was made for the safety and the well-being of the newly-appointed Beauty Queen Hla Yin Kyae, Miss Globe Myanmar 2014 as she has been threatened maliciously in various ways at the highest degree. Although Hla Yin Kyae is in the high spirit and amazingly brave enough to pursue her mission until it is successfully accomplished, we could not afford to take the unnecessary risk with that kind of barbaric behaviour. We decided to send her to other prestigious International Beauty Pageant and the announcement of her coronation will be made at the appropriate time. From the brighter side, she has more time to prepare for her perfection and put all-out effort on Mudra’s calling. We regard it gracefully asablessing in disguise.
And we are delighted to make the auspicious announcement of Aye Chan Myae’s coronation as Miss Globe Myanmar 2014. Actually, before that incident happened, we do not really want to put that duty on her shoulders as Aye Chan Myae isaMedical student and the nature of her study. Impressively, when we offer her to represent and serve her country asaMiss Globe Myanmar, she accepted it willingly asadutiful 4th runner-up of Miss Globe Myanmar National Pageant which was held in March 2014.
May God bless Aye Chan Myae, Miss Globe Myanmar 2014, Hla Nu Tun National Director and Miss Globe Myanmar family members, friends and fans. Your consistent and invaluable support and encouragement are highly appreciated. We won’t let you down.
Miss Globe Myanmar 2014.
Posted by VC at 4:52 PM
Labels: AyeChanMyae HlaYinKyay JuSanThar